Xog: R/W Khayre iyo CC Shakuur oo la dhex-dhexaadinayo - Caasimada Online
Home Warar Xog: R/W Khayre iyo CC Shakuur oo la dhex-dhexaadinayo
Xog: R/W Khayre iyo CC Shakuur oo la dhex-dhexaadinayo
Mas’uuliyiin katirsan dowladda Soomaaliya ayaa billaabay dhex-dhexaadin ay ka dhex-wadaan Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Illo xog-ogaal ah ayaa xaqiijiyay in Wasiirka cusub ee Arrimaha Gudaha, Cabdi Maxamed Sabriye uu hormuud u yahay waan-waanta lagu dhameynayo khilaafka labada dhinac.
Xogta ayaa sheegeysa in la joojiyay dacwaddii Maxkamadda Racfaanka gobolka Banaadir ee ku socotay CC Shakuur, iyadoo dowladda laga yaabo inay magdhaw ka bixiso weerarkii guriya Siyaasigan.
Macluumaadka aan helnay ayaa sheegaya in Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo xubnaha kale ee ku jira dhex-dhexaadinta ay doonayaan in qaab xeer-jajab ah lagu xaliyo arinta CC Shakuur oo saaran xayiraad dhanka safarka, sidoo kale laga qaaday Baasaboorkiisa.
Waan-waanta socota ayaa maraysa hadda heer gabo-gabo ah, iyadoo aan la ogeyn halka ay ku dhimaan doonto kiiska CC Shakuur, oo ka dhashay duulaan ay NISA ku qaadey Guriga uu ka degan yahay Muqdisho kaasi oo lagu dilay 5 kamid ahaa ilaaladiisa, isagana kasoo gaarey dhaawac fudud.
Xukuumadda ayaa sidoo kale xabsiga dhigtay CC Shakuur, iyadoo ku eedaysay inuu dhaqaale kasoo qaatey dalal shisheeye iyo inuu Caasimadda kawaday dhaq-dhaqaaqyo mooshin dhan ah Farmaajo lagu diyaarinayo.
CC Shakuur oo kamid ahaa musharaxiinta tartanka la gashay Madaxweyne Farmaajo doorashadii sideedii February ka dhacday Muqdisho, ayaa si aad ah u dhaliila Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Khayre iyo Xafiiska Madaxweynaha.